လူကုန်ကူးမှု – Eleven Media Group
မိန်းကလေးနှစ်ဦးကို လက်ထပ်ပေါင်းသင်းမည်ဟုပြောဆိုပြီး တရုတ်မယားအဖြစ် ရောင်းစားခဲ့သူနှစ်ဦးအား တွံတေးရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်
Posted on July 1, 2018 July 2, 2018 by သန့်ဇင်ကျော်
မိန်းကလေးနှစ်ဦးကို လက်ထပ်ပေါင်းသင်းမည်ဟု ပြောဆိုပြီး တရုတ်မယားအဖြစ် ရောင်းစားသူနှစ်ဦးအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွံတေးမြို့မရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း ဇူလိုင် ၁ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ တွံတေးမြို့နယ်နေ မ…..(၁၇)နှစ်သည် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရောင်းစားခံရပြီး မိသားစုမှ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့သောကြောင့် နေအိမ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိနေကြောင်း သိရသဖြင့် ဇွန် ၂၉ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် အမှတ်(၆)လူကုန်ကူးမှု တားဆီးနှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့စု (ရန်ကုန်)မှ တာဝန်ရှိသူများက သွားရောက် မေးမြန်းစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မေးမြန်းရာ မ…..(၁၇) နှစ်သည် ဧပြီလအတွင်းက ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ အနှိပ်ခန်းတစ်ခန်းတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနေ မ…..(၂၅)နှစ်နှင့် ရင်းနှီးခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက် ၎င်းတို့ နှစ်ဦးမှာ လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သည့် အောင်အောင်နှင့် အငယ်ကောင်ဆို သူတို့နှင့်သိရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းနောက် မ….(၁၇) နှစ်မှာ ဆိုင်ရှင်ထံသို့ ခွင့်တောင်းပြီး တွံတေးမြို့ရှိ မိဘများထံပြန်ရန်ပြင်နေစဉ် ၎င်း၏သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူ မ….(၂၅)နှစ်မှ လိုက်လည်ချင်သည်ဟု ပြောသဖြင့် ခေါ်ဆောင်ကာ ပြန်လာခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့ပြန်လာစဉ် လမ်း၌ အောင်အောင်နှင့် အငယ်ကောင်ဆိုသူနှစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ၎င်းတို့က အငှားယာဉ်ဖြင့် နေအိမ်သို့လိုက်ပါ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့နောက် နေအိမ်မှတစ်ဆင့် မ….(၁၇)နှစ်နှင့် မ….(၂၅) နှစ်တို့မှာ အောင်အောင်နှင့် အငယ်ကောင်တို့နှစ်ဦးနှင့်အတူ ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး အဆိုပါနေရာသို့ အရောက်တွင် အောင်အောင်နှင့် အငယ်ကောင်တို့က မ….(၁၇) နှစ်တို့ နှစ်ဦးအား ချစ်ကြိုက်ကြောင်းနှင့် လက်ထပ်ပေါင်းသင်းလိုသည်ဟု ပြောဆိုသဖြင့် လက်ခံခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းနောက် အောင်အောင်နှင့် အငယ်ကောင်တို့က မ….(၁၇) နှစ်တို့ နှစ်ဦးအား မန္တလေးမြို့သို့ ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီး လင်မယားအဖြစ် ပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ ပေါင်းသင်းနေထိုင်နေစဉ် အောင်အောင်၏ အဆက်အသွယ်ဖြင့် မ…..(၁၇)နှစ်တို့နှစ်ဦးအား မူဆယ်မြို့သို့ ခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုမှတစ်ဆင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ထပ်မံခေါ်ဆောင်သွားကာ တရုတ်အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် လက်ထပ်ရန် ယွမ် ၂၅၀၀၀၀ ဖြင့် ရောင်းစားခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ယင်းသို့ရောင်းစားခံခဲ့ရပြီးနောက် တရုတ်နိုင်ငံရှိ မြို့တစ်မြို့သို့ ရောက်ရှိစဉ် ခေါ်ဆောင်လာသည့် တရုတ်မိသားစုအား ဖုန်းဆက်ချင်ကြောင်း ပြောဆိုပြီး အနီးရှိ ဖုန်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲသို့ ၀င်ရောက်ကာ အဆိုပါ ဖုန်းဆိုင်ရှိလူများအား အကူအညီ တောင်းခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့အကူအညီတောင်းသဖြင့် ယင်းဖုန်းဆိုင်မှ လူများက တရုတ်ရဲများသို့ ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားပေးခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ အကူအညီဖြင့် မိဘများနှင့် အဆက်အသွယ်ရကာ ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“မိန်းကလေးနှစ်ယောက်စလုံးကတော့ အခုမြန်မာပြည်ထဲကို ပြန်ရောက်ပါပြီ။ သူတို့မိဘတွေက ရွှေလီကိုသွားခေါ်တယ်လို့ သိရတယ်။ ကျူးလွန်တဲ့လူနှစ်ဦးက ညီအစ်ကိုတွေလို့တော့ ပြောတယ်။ လောလောဆယ်တော့ စုံစမ်းတုန်းပေါ့နော်။ အခုသူတို့ နှစ်ယောက်ကို ဖမ်းမိဖို့အတွက် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်” ဟု လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ဆိုသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှ အောင်အောင်နှင့် အငယ်ကောင်ဆိုသူတို့နှစ်ဦးကို တွံတေးမြို့မရဲစခန်းမှ (ပ) ၅၃၁/၂၀၁၈၊ လူကုန်ကူးမှု တားဆီးကာကွယ်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၂၄/၃၂ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားပြီး ဖမ်းဆီးရမိရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted in Crime, NewsTagged လူကုန်ကူးမှုLeaveaComment on မိန်းကလေးနှစ်ဦးကို လက်ထပ်ပေါင်းသင်းမည်ဟုပြောဆိုပြီး တရုတ်မယားအဖြစ် ရောင်းစားခဲ့သူနှစ်ဦးအား တွံတေးရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်
အမေရိကန်၏ လူကုန်ကူးမှုအစီရင်ခံစာ၌ မြန်မာနိုင်ငံ အဆင့်ကျဆင်း
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ထုတ်ပြန်သည့် အစီရင်ခံစာတစ်စောင်တွင် မြန်မာ နိုင်ငံသည် လူကုန်ကူးမှုကို ကိုင်တွယ်ရန် လုံလောက်စွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း ဖော်ပြလျက် မြန်မာနိုင်ငံကို အဆိုးရွားဆုံး အဆင့်သို့ ချခဲ့သည်။
နှစ်ပတ်လည် လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ (TIP) က မြန်မာနိုင်ငံသည် ရခိုင် ပြည်နယ်တွင် စစ်ဆင်ရေးတစ်ရပ်ကြောင့် ထွက်ပြေးသွားရသည့် ဘင်္ဂါလီမွတ်စလင်များကို ကာကွယ်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် လူကုန်ကူးမှု အညွှန်းကိန်း အဆင့် (၃) သို့ ပြန်လည်ကျဆင်းခဲ့ကြောင်း ပြောကြားထားသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် အကြမ်းဖက်သမားများက ရဲစခန်းများကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက် တပ်မတော်က လက်တုံ့ပြန်မည်ကို ကြောက်သောကြောင့် ဘင်္ဂါလီမွတ်စလင် ၇၀၀,၀၀၀ ကျော်သည် ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြ ခြင်းဖြစ်သည်။
ကုလသမဂ္ဂနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့က ယင်းအကြမ်းဖက်မှုသည် လူမျိုးစုလိုက် သုတ်သင်မှုမြောက်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ကြသည်။
ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြသော ဘင်္ဂါလီမွတ်စလင် အများစုသည် အိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံရှိ ပြန့်ကျဲနေသော ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် နေထိုင်နေရသည်။
ဒုက္ခသည်များထဲမှ အများအပြားသည် အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးများဖြစ်သောကြောင့် လူကုန်ကူးသူများအတွက် သားကောင်များဖြစ်လာသည်ဟု အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြထားသည်။
၎င်းတို့၏ ရွှေ့ပြောင်းလာမှု ရလဒ်အရ ဘင်္ဂါလီမွတ်စလင်များသည် ခေါင်းပုံဖြတ်မှု ခံရခြင်း သို့မဟုတ် လိင်ကုန်ကူးမှု ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အခြားနိုင်ငံများသို့ ပို့ဆောင်ခံရခြင်း တို့ ဖြစ်ပေါ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ဒုက္ခသည်ကလေးငယ်အချို့သည် ခရီးစဉ်အကူးအပြောင်း၌ ပြန်ပေးဆွဲခံရပြီး အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှားနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံတို့၌ အတင်းအကျပ် လက်ထပ်ထိမ်းမြားစေရန် ရောင်းစားခြင်းခံရကြောင်း အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရဟာ လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် အနိမ့်ဆုံး စံနှုန်းတွေကိုတောင်မှ အပြည့်အ၀ ပြည့်မီခြင်း မရှိပါဘူး။ အဲဒီလို လုပ်ဖို့လည်း အရေးပါတဲ့ အားထုတ်မှု ပြုလုပ်နေခြင်း မရှိပါဘူး” ဟု အစီရင် ခံစာ၌ ပြောကြားထားသည်။
ယင်းအစီရင်ခံစာနှင့်ပတ်သက်၍ အေအက်ဖ်ပီသတင်းဌာနက မြန်မာအာဏာပိုင်များထံမှ မှတ်ချက် တောင်းခံရာတွင် ယခုအထိ ပြန်ကြားခြင်း မရှိသေးဟု ဆိုသည်။
နောက်ပိုင်းတွင် မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတို့သည် ဘင်္ဂါလီမွတ်စလင်များကို ပြန်လည်လက်ခံရန် သဘောတူညီချက်တစ်ရပ် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၊ လွတ်လပ်စွာ သွားလာနိုင်မှုနှင့် နိုင်ငံသားဖြစ်မှုတို့ကဲ့သို့သော အခြေခံအခွင့်အရေးများကို အာမခံပေးခြင်း မရှိဘဲ ပြန်သွားရမည်ကို လူအများအပြားက စိုးရိမ်နေကြသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် မကြာသေးမီက မုတ်သုံမိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် လူသေဆုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်သည့် မြေပြိုမှုများကို ရင်ဆိုင်ရပြီး လူပေါင်း ထောင်နှင့်ချီလျက်ကို ရွှေ့ပြောင်း ပေးခဲ့ရသည်။
လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များက မြန်မာလုံခြုံရေးတပ်များသည် ဘင်္ဂါလီမွတ်စလင်များအပေါ် တရားဥပဒေပြင်ပသတ်ဖြတ်မှုများ၊ မုဒိမ်းကျင့်မှုများနှင့် မီးရှို့မှုများ ကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့ကြပြီး မြန်မာတပ်မတော်က ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
ယခုအစီရင်ခံစာတွင် နိုင်ငံပေါင်း ၁၈၇ နိုင်ငံကို အဆင့်သုံးဆင့်ခွဲ၍ သတ်မှတ်ပြီး အောက်ဆုံးအဆင့် (၃) စာရင်းဝင်သည့်နိုင်ငံများအား ကုန်သွယ်ရေးနှင့် မဆိုင်သည့် ပိတ်ဆို့မှုများ ချမှတ်ခြင်းဆီသို့ ဦးတည်သွားစေ နိုင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် တရုတ်၊ ရုရှား၊ လာအို၊ တောင်ဆူဒန်နှင့် မြောက်ကိုရီးယားတို့နှင့်အတူ အနိမ့်ဆုံးအဆင့် (၃) ၌ ပါဝင်ကြောင်း ယခုနှစ် အစီရင်ခံစာ၌ ဖော်ပြထားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတို့သည် အဆင့် (၂) စောင့်ကြည့်အဆင့်မှနေ၍ အဆင့် (၂) သို့ တက်လာခဲ့သည်။ အဆင့် (၂) စောင့်ကြည့်အဆင့်ဟူသည် လူကုန်ကူးခံရသူများအား ကာကွယ်ရန် လုံလောက်စွာ လုပ် ဆောင်ခြင်း မရှိသော်လည်း အရေးပါသည့် အားထုတ်မှုများကို ပြုလုပ်နေသည့်အဆင့် ဖြစ်သည်။
Posted in NewsTagged လူကုန်ကူးမှုLeaveaComment on အမေရိကန်၏ လူကုန်ကူးမှုအစီရင်ခံစာ၌ မြန်မာနိုင်ငံ အဆင့်ကျဆင်း
Posted on June 23, 2018 by ရှိုင်းလင်းအောင်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သန်လျင်မြို့နယ်တွင် အသက် ၂၀ အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦးကို မူဆယ်နယ်စပ်၌ အိမ်အကူ၊ ဈေးရောင်းလုပ်ကိုင်ရမည်ဟု ဦးလေးဖြစ်သူနှင့်ပွဲစားများက လိမ်လည်ပြောဆိုပြီး တရုတ်မယားအဖြစ် ရောင်းစားမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဇွန် ၂၂ ရက် တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ စုံစမ်း သိရှိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သန်လျင်မြို့ နယ်တွင် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီက မ…..(၂၀ နှစ်) ၏နေအိမ်သို့ ဦးလေးဖြစ်သူ စောမြင့်သိန်းရောက်ရှိလာပြီး မူဆယ်နယ်စပ် တွင်အိမ်အကူ၊ ဈေးရောင်းလုပ်ကိုင်လျှင် စရိတ်ငြိမ်း တစ်လငါးသိန်းရရှိမည်ဖြစ်ကာ အနည်းဆုံး ခြောက်လလုပ်ကိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဦးလေးဖြစ်သူနှင့် တစ်ရပ်ကွက် တည်းနေထိုင်သူ မသီတာဟုဆိုသည့် အမျိုးသမီးက တာဝန်ယူပို့ဆောင်ပေးမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဦးလေးဖြစ်သူ၏ ပြောစကားကြောင့် မ….(၂၀ နှစ်)နှင့် သူမ၏မိခင်တို့သည်ဦးလေး ဖြစ်သူ စောမြင့်သိန်း၊ မသီတာတို့နှင့်အတူ မူဆယ်မြို့သို့လိုက်သွားခဲ့ပြီး ရွှေလီမြို့ထဲရှိ တည်းခိုခန်းတစ်ခုတွင်နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တည်းခိုနေစဉ် ပွဲစားကျော်ကျော်နှင့် မရှမ်းမတို့ လင်မယားရောက်လာပြီး မ…..(၂၀ နှစ်) အား တရုတ်အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် တစ်နှစ်လက်ထပ်ပေါင်းသင်းပါက ကျပ်သိန်း ၃၀ ရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် တစ်နှစ်ပြည့်ပါက နေအိမ်ပြန်ပို့ပေးမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မ….(၂၀ နှစ်) သည် မူဆယ်သို့ လိုက်လာရခြင်းမှာ တရုတ်အမျိုးသားနှင့်လက်ထပ်လိုခြင်း မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားသည့်အတွက် တရုတ်နှင့် မယူလျှင် ရန်ကုန်မှခေါ်လာခဲ့သည့် စရိတ်များနှင့် တည်းခိုခန်းခများ ချက်ချင်းပေးရမည်ဟု အကျပ်ကိုင်ပြောကြားခဲ့ပြီး ဦးလေးဖြစ်သူ စောမြင့်သိန်းကလည်း လက်ထပ်ရန်တိုက်တွန်းပြောဆိုသဖြင့် တရုတ်အမျိုးသားနှင့် ပေါင်းသင်းရန် မ….(၂၀ နှစ်) က သဘောတူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့နောက် သုံးရက်အကြာတွင် မူဆယ် နယ်စပ်ရွှေလီမြို့ရှိ တည်းခိုခန်းသို့ တရုတ် အမျိုးသားသုံးဦးရောက်ရှိလာပြီး ကျော်ကျော်၊ မရှမ်းမ၊ မသီတာဆိုသူတို့နှင့် စကားပြောဆို ကာ ကျပ်သိန်း ၃၀ ကို မ…. (၂၀ နှစ်) ၏ မိခင် သို့ပေးကာ ၎င်းကို တရုတ်နိုင်ငံ ဟူနန်မြို့သို့ ခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းနောက် တရုတ်အမျိုးသားသုံးဦးက မ…. (၂၀ နှစ်) အား အမည်မသိ တရုတ်အမျိုးသားတစ်ဦးထံ ထပ်မံရောင်းစားခဲ့ပြီး ယင်းအမျိုးသားနှင့် တစ်လခန့် ပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ မ…. (၂၀ နှစ်) မှာ နေမကောင်း ဖြစ်၍ ဆေးခန်းပြစဉ် အပျိုမဟုတ်ဘဲ ကလေး မွေးခဲ့ဖူးကြောင်း တရုတ်အမျိုးသားက သိရှိသဖြင့် ၎င်းက အမည်မသိ တရုတ်တစ်ဦးထံ ပြန်ပို့ရာမှ မ….(၂၀ နှစ်) က တရုတ်ရဲစခန်းသို့ ထွက်ပြေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းနောက် တရုတ်ရဲစခန်းက မ….(၂၀ နှစ်) ကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ လွှဲပြောင်းခဲ့ပြီး နေရပ်ပြန်လည် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းအမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သန်လျင်မြို့မ ရဲစခန်းသို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းသော်လည်း ဆက်သွယ်၍မရခဲ့ချေ။
လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးကမူ အမှုဖြစ်စဉ်မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုပြီး ကျူးလွန်သူများကို ဖမ်းဆီးရမိရေးအတွက် နှစ်နိုင်ငံ ချိတ်ဆက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ကောင်မလေးရဲ့ ဦးလေးအပါအ၀င် လေးယောက်ပေါ့။ သူတို့ ပိုက်ဆံလည်း ရခဲ့တယ်။ ဒီအမှုမှာ ဦးလေးပါနေတဲ့အတွက် သူတို့က အမှုမဖွင့်ချင်ကြဘူး။ ဒါကို ရဲက တရားလိုလုပ်ပြီး အမှုဖွင့်ရတာပေါ့။ သူတို့ လေး ယောက်ကို ဖမ်းမမိသေးဘူး။ ဖမ်းမိဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ မူဆယ်နဲ့ ချိတ်ရမယ်။ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ဆက်ဆံရေးရုံးနဲ့ ချိတ်ရမယ်။ သူတို့ရဲ့ ပုံသဏ္ဌာန်ရယ်၊ ဟိုဘက်က လိပ်စာတို့ အနီးစပ်ဆုံးရရင် ဖမ်းမိနိုင်ပါတယ်” ဟု လူကုန်ကူး မှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ယင်းအမှုတွင် တရုတ်အမျိုးသားနှင့် အဓမ္မလက်ထပ်ရန် စေခိုင်းပြီး ငွေကြေးခေါင်းပုံဖြတ်ကြသည့် စောမြင့်သိန်း၊ မသီတာ၊ ကျော်ကျော်နှင့် မရှမ်းမတို့ လေးဦးကို သန်လျင်မြို့ နယ်ရဲစခန်းတွင် ဇွန် ၂၂ ရက်က (ပ) ၁၈၀၇/၂၀၁၈၊ လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၂၈ (က) ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsTagged လူကုန်ကူးမှုLeaveaComment on သန်လျင်မြို့နယ်တွင် အသက် ၂၀ အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ဦးကို မူဆယ်နယ်စပ်၌ အိမ်အကူ၊ ဈေးရောင်းလုပ်ကိုင်ရမည်ဟု ဦးလေးဖြစ်သူနှင့် ပွဲစားများက လိမ်လည်ပြောဆိုပြီး တရုတ်မယားအဖြစ် ရောင်းစားမှုဖြစ်ပွား
ရေးမြို့ ပင်လယ်တွင်းက ငရဲခန်းများ (သို့မဟုတ်) သေမင်းထံမှ လွတ်မြောက်ကြခြင်း
ရေလုပ်သားများ ပြန်လည်ရောက်ရှိရေး မိသားစုဝင်များ ဆန္ဒထုတ်ဖော်စဉ်
ကိုနေမျိုးတစ်ယောက် ငါးလအတွင်း အကြိမ်ရေ ၅၀၀ နီးပါးခန့် အနှိပ်စက်ခံခဲ့ရပြီး ရွာကိုပြန်ရောက်ချိန်မှာတော့ ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ ဒဏ်ရာအမာရွတ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ရရှိခဲ့လေသည်။ တစ်ရက်လျှင် သုံးကြိမ်ခန့်ဖြင့် နေ့စဉ်ဆိုသလို ဖောင်တုပ်ကြိုးဖြင့် ရိုက်နှက်ခြင်း၊ ၀ါးခြမ်းဖြင့်ရိုက်ခြင်း၊ ထိုးကြိတ်ကန်ကျောက်ခြင်းနှင့် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကိုက်ဆွဲသည်ကိုပါ ခံခဲ့ရသည်။ ပြင်ပဒဏ်ရာများမှာ ရေတွက်၍ရခဲ့သော်လည်း အတွင်းဒဏ်ရာများကတော့ ဆေးစစ်ကြည့်မှပင် ဘယ်လောက်ပျက်စီးနေပြီဆိုတာကို သိရတော့မည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိမှာတော့ ကိုနေမျိုး အားအင်ပြည့်ဝစေရန် ပုလင်းကြီး ချိတ်ဆွဲထားကြသည်။
ကိုနေမျိုးဇာတိက နေပြည်တော်အနီးတွင်ဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်ကျပြီးကတည်းက မိန်းမဖြစ်သူ၏ ဇာတိဖြစ်သည့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်ပိုင်း) ပြည်ခရိုင် ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ရွာသာယာကျေးရွာသို့ ပြောင်းလာခဲ့သည်မှာ သားလေးအသက် လေးနှစ်ပင်ရှိခဲ့ပြီ။ ယင်းသည်ကပင် သူတို့၏ အိမ်ထောင်သက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကြုံရာကျပန်း လုပ်ကိုင်စားခဲ့သူပီပီ မိန်းမဇာတိရွာကလေးတွင်လည်း ထင်းခွေ၊ ရေခပ်၊ ပေါင်းရှင်းယာခုတ်ဖြင့် ထမင်းစားသာသာဖြင့် ရုန်းကန်ခဲ့ကြသည်။ ဘ၀သည်ချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့ဝေးစွ၊ အဆင်ပြေရန်ပင် မလွယ်လှသော အခြေအနေတွင်၊ ကိုနေမျိုးတို့ နေထိုင်ရာသို့ လူငယ်တစ်ဦးနှင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးတို့ ရောက်လာခဲ့ကြသည်။ ထိုလူငယ်မှာလည်း ရွာသာယာရွာ ဇာတိပင်ဖြစ်သည်။ အလုပ်လုပ်လိုသူများအတွက် အလုပ်ပေးရန်အတွက် ရောက်လာခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ရွာသာယာရွာကလေးက ဧရာဝတီမြစ် အနောက်ဘက်ကမ်းတွင်ရှိပြီး ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင် ဖိုးဦးတောင်ဘုရားအနီး စတုတ္ထမြစ်ကျဉ်း၊ ကမ်းနဖူးတွင်ရှိကာ ရေလမ်းသာ အဆက်အသွယ်ကောင်းကာ ကုန်းလမ်းဖြင့် ခရီးကကြမ်းသည်။ ပြည်မြို့နှင့် နီးသော်လည်း ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ စိတ်ဓာတ်အရရော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရပါ နိမ့်ကျနေသေးသည်။
“သူတို့လာခေါ်တုန်းကတော့ မန္တလေးမှာ ငါးအကြီး အသေးရွေးရမယ် ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး။ တစ်သိန်းနှစ်သောင်းရမယ်ဆိုပြီး လာခေါ်ကြတာ။ ရွာကတင်မဟုတ်ဘူး ဟိုဘက်ရွှေတောင်မြို့နယ်ထဲက စာစီကုန်း၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ် ကြာအင်းဘက်ကလည်း လိုက်သွားကြတယ်။ အားလုံးငါးယောက် လိုက်သွားတယ်။ တစ်ယောက်ကတော့ မလုပ်နိုင်ဘူးပြောလို့ အလုပ်ထဲမရောက်ခင် လိုက်ရွေးရတာ လေးသိန်းလောက်ကုန်သွားတယ်။ ကိုနေမျိုးကတော့ ပြန်ရောက်လာတယ်။ သုံးယောက်ကျန်ခဲ့တယ်လို့ ပြောတယ်” ဟု ရွာသာယာကျေးရွာသားများက သိသမျှကို တစ်ယောက်တစ်ပေါက်ဖြင့် အလုအယက်ပြောနေကြသည်။
ကိုနေမျိုး ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခြင်းကပင် အိပ်မက်ဆန်ဆန် ကယောင်ချောက်ချားဖြစ်စေပြီး ပိန်ခြောက်မည်းနေသည့် အသားအရေနှင့် ဒဏ်ရာအနာတရများ၊ ပိန်လှီနေသည့် ခန္ဓာကိုယ်ယိုင်နဲ့နဲ့ ခြေလှမ်းများဖြင့် အိမ်သို့ရောက်လာခဲ့ခြင်းအတွက် မိသားစုများအပါအ၀င် အနီးနားရှိသူများကပါ ကြောက်လန့်တကြားဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းမေးမြန်းခဲ့ကြတော့သည်။ လူအများ၏ အမေးစကားကို ကိုနေမျိုး ကောင်းစွာခွန်းတုံ့မပြန်နိုင်ပဲ စကားလုံးတစ်လုံးနှင့် တစ်လုံးအခြား မိနစ်အနည်းငယ်ကြာအောင် အားယူကာ အသက်ကိုရှူရှိုက်နေရသည်။ ကိုနေမျိုး ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည့်နေ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီ ၂၃ ရက်တွင်ဖြစ်သည်။
“လာခေါ်ကတည်းက ကျွန်တော်က သိပ်လိုက်ချင်တာမဟုတ်ဘူး။ ယောက္ခမတွေက လိုက်သွားဆိုလို့ လိုက်သွားရတာ။ ကျွန်တော်သွားချင်တာက တရုတ်တို့ ထိုင်းတို့ကိုသွားချင်တာ။ အခုကတော့ ကံကောင်းလို့ ပြန်ရောက်လာတာ” ဟု ပြန်ရောက်ပြီး နောက်တစ်ရက်တွင် သတင်းမေးလာသည့် ဧည့်သည်များကို ကိုနေမျိုးက ပြောပြနေသည်။
ရေးမြို့ ကျားဖောင်ရေ လုပ်သားအဖြစ်မှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတစ်ဦး
၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် ပြည်ခရိုင် ပန်းတောင်းမြို့နယ် ရွာသာယာကျေးရွာမှ ကိုနေမျိုးနှင့် ကိုဌေးဇော်အောင်၊ ကြာအင်းကျေးရွာမှ ကိုမြထွန်း ရွှေတောင်မြို့နယ်၊ ကျီးသဲ၊ မြို့မ၊ စာစီကုန်းကျေးရွာမှ ကိုရန်ပိုင်ထွန်းအပါအ၀င် နှစ်ဦးတို့မှာ မန္တလေးတွင် ငါးရွေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်အတွက် စတင်ခရီးထွက်ခဲ့ကြပြီး မန္တလေးသို့ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ ရန်ကုန်တွင် ပွဲစားမှတစ်ဆင့် ရေးမြို့သို့ အပို့ခံခဲ့ကြရခြင်းဖြစ်သည်။
“ရန်ကုန်ရောက်တော့ ကိုသားကြီးဆိုတဲ့ ပွဲစားကတစ်ဆင့် Express ကားနဲ့ ရေးကိုပို့ခံရတယ်။ ရေးရောက်တော့ သူတို့က ပွဲစားခပေးရမယ်လို့ အစကမပြောဘူး။ နောက်ကျတော့ ညီလေးတို့ ပွဲစားခပေးရမယ်ပြောတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း ရောက်လက်စနဲ့ အေးဗျာပေးမယ်ဆိုပြီး အလုပ်ရှင်ဆီရောက်တော့လည်း မင်းတို့တွေတစ်လကို ငါးသောင်းနဲ့ဆိုတော့ ပွဲစားကိုမလုပ်ဘူး မင်းတို့ပြောတော့ တစ်သိန်းနှစ်သောင်းနဲ့ ရန်ကုန်မှာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ၀င်လုပ်ရင်တောင် ငါးသောင်းရတယ်လို့ပြောပြီး ကျွန်တော်တို့ကို လာခေါ်တော့လို့ပြောတယ်။ လာခေါ်မလားဆိုပြီး စောင့်သေးတယ်။ မလာတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့လည်း ပင်လယ်ထဲကို လိုက်သွားကြတယ်” ဟု ပင်လယ်အတွင်း မဆင်းခင် လမ်းခရီးအကြောင်းကို ကိုနေမျိုးက ပြန်ပြောပြခဲ့သည်။
အလားတူဖြစ်စဉ်မျိုးက ယခုတစ်ကြိမ်မှ ကြုံတွေ့ရသည်တော့ မဟုတ်တော့ချေ။ လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလလယ်ခန့်ကလည်း တရားမ၀င် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ရသည့် အလုပ်သမား ၂၇ ဦးကို သွားရောက်ခေါ်ယူခဲ့ရသည့် ဖြစ်စဉ်မျိုးရှိခဲ့ဖူးသည်။ ထိုသူများကလည်း ပြည်မြို့ဗဟိုပြုကာ မြေလတ်ဒေသတစ်ဝိုက်မှ လက်လုပ်လက်စား ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများပင်ဖြစ်သည်။ လွယ်လွယ်ကူကူ ခေါ်ယူရခဲ့သည်တော့ မဟုတ်ပါချေ။ အဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများစွာဖြင့် ဆက်သွယ်တောင်းဆို တောင်းပန်လျှို့ဝှက် လုပ်ခဲ့ရသည်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်။
ရေးမြို့နယ် အစင်ကျေးရွာနှင့် အနီးတစ်ဝိုက်တွင် လုပ်ငန်းရှင်များ၏ တရားဝင်ဖြေဆိုချက်အရ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ အင်္ဂလန်ကျားဖောင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသည့် လုပ်ငန်းရှင် ၁၀၀ ကျော်ရှိနေပြီး ကျားဖောင်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ကျားဖောင်တစ်ခုလျှင် ဖောင်ဦးစီးအပါအ၀င် သုံးဦးအထိ နေထိုင်ကြကာ လပေါင်းများစွာကြာအောင် ကုန်းပေါ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်းမရှိဘဲ ပင်လယ်အတွင်း နေထိုင်လုပ်ကိုင်ကြရသည်ဟု ဆိုသည်။
“ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကို ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ပါလာတဲ့စာရင်းအရ ရေလုပ်သားမှတ်ပုံတင် ရှိ မရှိ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးချင်တယ်လို့ပြောတော့ မှတ်မှတ်ရရ ကျန်နေတာက ကျွန်တော်ယူသွားတဲ့စာရင်း ၂၀ ကျော်မှာ သုံးဦးလောက်ပဲတွေ့တယ်။ တကယ်ငါးလုပ်ငန်းတွေကို ခင်ဗျားတို့ အလုပ်သမားလစာပေးတဲ့ စာရင်းနဲ့ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ အတော်ကိုကွဲလွဲနေတာကို တွေ့ရတယ်” ဟု ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်းက ရေးမြို့သို့ တရားမ၀င်ရေလုပ်သားများ ကယ်ထုတ်ပေးခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်သည့် ကိုနေထွန်းက ပြောသည်။
မြို့နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနက ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းရှင်များကို လုပ်ငန်းခွင့်ပြုရာတွင် စည်းကမ်းချက်များကိုပါ တစ်ခါတည်း သတ်မှတ်ပေးခဲ့သော်လည်း ချိုးဖောက်မှုများအနက် ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မည့် ရေယာဉ်ပေါ်တွင် ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ရေလုပ်သားကိုသာ တင်ဆောင်ရမည်ဆိုသည့် အချက်ပင်ဖြစ်သည်။ အများစုမှာ တရားမ၀င် ရေလုပ်သားများသာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားမှ လာရောက်ကြသည့် အမည်မဲ့များဖြစ်နေသည်။ အချို့မှာ အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား စာချုပ်စာတမ်းများရှိသော်လည်း စာချုပ်စဉ်ကပင် စာဖတ်တတ်ခြင်းမရှိဘဲ မထူးဇာတ်ခင်းနေသူများသာ ဖြစ်နေကြသည်။
“စာချုပ်တော့ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့မှ စာမဖတ်တတ်တာ။ ပြန်မယ်ဆိုရင်လည်း ပွဲစားကယူထားတဲ့ ငွေကိုဆတိုးနဲ့ ပြန်လျော်ရမယ်တဲ့။ ရောက်ပြီးနောက်တော့ မထူးဘူးဆိုပြီး စာချုပ်ပေါ်မှာ ဒီအတိုင်းချရေးလိုက်တာပဲ” ဟု ကိုနေမျိုးက ပြောသည်။
နှစ်ဦးသဘောတူသည်ဖြစ်စေ မတူသည်ဖြစ်စေ စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးပါက ကမ်းမမြင် လမ်းမမြင် ပင်လယ်ပြင်အတွင်းသို့ စက်လှေတစ်စင်းဖြင့် ခေါ်ဆောင်ရာသို့ လိုက်ပါသွားကြပြီး တစ်ညခန့် အိပ်စက်မောင်းနှင်ပြီးနောက် အလုပ်လုပ်ကြရမည့် ပင်လယ်ကျားဖောင်များပေါ်သို့ လူခွဲကာ ချထားခဲ့လိုက်ကြတော့သည် ယင်းသည်ကပင် ငရဲခန်းတစ်ခုသို့ စတင်ဝင်ရောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး သေစာရင်းနံပါတ် သွင်းထားလိုက်ခြင်း ဖြစ်တော့သည်။
“ကျားဖောင်ပေါ်ရောက်တော့ ဖောင်ဦးစီးနဲ့ အခြားတစ်ယောက်တွေ့တယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ဆို သုံးယောက်ပေါ့။ အလုပ်လုပ်ရတာကတော့ အချိန်ရယ်လို့မရှိဘူး။ ညပိုင်းတွေလည်း လုပ်ရတယ်။ ကျန်တဲ့အချိန်တွေကြတော့ ငါး၊ ပုစွန်ရွေးရတယ်။ ဖောင်ပေါ်မှာ ပဲလှန်းတယ်။ စက်လှေနဲ့ လာလာသယ်သွားကြတယ်။ တစ်ခါတည်း ရိက္ခာတွေသယ်လာပေးတယ်။ စားချင်တာလေးတွေလည်း မှာလိုက်ရတယ်။ ရောက်ပြီးနှစ်လကျော်အထိ ဘာမှမဖြစ်သေးဘူး။ နောက်ပိုင်းကျတော့ ဆက်တိုက်နှိပ်စက်ခံရတော့တာပဲ။ ဖောင်ဦးစီးက သူ့ကိုယ်သူ လူမိုက်လို့လည်း စိန်ခေါ်သေးတယ်။ တစ်နေ့ကို သုံးခါထက်မနည်းဘူး နှိပ်စက်ရိုက်နှက်တာကတော့ နည်းမျိုးစုံပဲဗျာ။ တစ်ခါတလေ ကုန်းတောင်ကိုက်တယ် ဒဏ်ရာတွေကတော့ မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ” ဟု ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ အမာရွတ်ဒဏ်ရာများကိုပြရင်း ကိုနေမျိုးက ဆိုသည်။
ပင်လယ်ပြင်အတွင်း ရှစ်လခန့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး ဖောင်ဖျက်သည့်အခိုက်တွင် ကမ်းပေါ်သို့ပြန်လာခဲ့ကာ ငါးလုပ်ငန်းရှင်၏ အမျိုးတော်စပ်သူ စိတ်ရင်းကောင်းသူတစ်ဦးက ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် ကိုနေမျိုးတစ်ယောက် ဖျားနာခြင်းနှင့် အာဟာရချို့တဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် မည်းခြောက်ချည့်နဲ့နေခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
“ကျွန်တော်က ကံကောင်းတယ်လို့ ပြောရင်ရတယ်။ လမ်းမှာ အဲဒီလိုလျှောက်သွားနေရင် ဖမ်းပြီး ပင်လယ်ထဲပြန်ပို့ကြတယ်။ လွတ်လာဖို့မလွယ်ဘူး။ နေမကောင်းလည်း ဆေးကုမပေးဘူး။ လုံးလုံးသေသွားလည်း ရေထဲကန်ချလိုက်ကြတာပဲ။ ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ လအတွင်းမှာကို ပင်လယ်ထဲမျောနေတဲ့ လူသေအလောင်း ငါးခါလောက်မြင်ခဲ့ရတယ်” ဟု ကိုနေမျိုးက ပြောသည်။
အဆိုပါ ရေးမြို့နယ် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းအတွင်း ပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်း မရှိသေးသူများနှင့် သေဆုံးခဲ့သူအတွက် ပြည်မြို့တွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်တောင်းဆိုမှုများကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၂၁ ရက်နှင့် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက်တို့တွင် ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး သေဆုံးခဲ့သူအတွက်လည်း ရေးမြို့မရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ထားရှိထားကြောင်း ရေလုပ်သားအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ရသည့် မိသားစုဝင်များထံက သိရသည်။
“ငါးဖမ်းတာမှာ ၀ါးဖောင်တွေနဲ့ ကျားတွေတိုက်ရတယ်။ သုံးလခြောက်ရက် ကြာခဲ့တယ်။ ခေါ်သွားတုန်းကတော့ တစ်လကို တစ်သိန်းရှစ်သောင်းရမယ်။ ကုန်းပေါ်မှာ ငါးရွေးရမယ်ပြောပြီး ဟိုကျတော့ ရေထဲမှာ ငါးဖမ်းရတာ။ အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဦးမြင့်ခိုင်ကတော့ အဲဒီနေ့က သူ့ကိုပုစွန်ပြုတ်ခိုင်းပြီး ထမင်းအိုးတည်ခိုင်းတာ ပုစွန်ပြုတ်ပြီး ထမင်းအိုးမတည်ဘူး။ ပုစွန်လည်း ကျက်အောင်မပြုတ်ဘူးဆိုပြီး ဖောင်ဦးစီး ကိုသန်းမြင့်က ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ရိုက်တယ်၊ ရေထဲကန်ချတယ်။ ပြန်အတက်မှာ ထင်းစနဲ့ ခေါင်းကိုရိုက်ချတယ်။ အမေ အမေနဲ့ သုံးခါလောက်အော်ပြီး ပြန်ပေါ်မလာတော့ဘူး။ ဖြစ်တာကတော့ ရောက်ပြီးရက်ပိုင်းမှာပဲဖြစ်တာ။ ကျွန်တော်အပြင် အခြားသူတွေလည်းမြင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို လာခေါ်တာက ကိုဂျင်မီဆိုတဲ့လူတွေ လာခေါ်တာပါ” ဟု ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူများထဲက ကိုစိုးသူက ပြောသည်။
ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည့် ကိုနေမျိုးအား ကြားနာပွဲတစ်ခုကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီ ၂၇ ရက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
“အလုပ်သမားကိစ္စ လူကုန်ကူးမှုကိစ္စတွေကို ထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုလာပြီ။ အရင်က မိန်းကလေးတွေကနေ အခုယောက်ျားလေးတွေဘက်ကိုပါ လှည့်လာတယ်။ အခုလိုမျိုး နှိပ်စက်တာမျိုးတွေကို ပြည်ထောင်စုအဆင့်အနေနဲ့ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ဖို့လိုလာပြီ။ ကိုနေမျိုးကို မြင်လိုက်ရတော့ စိတ်ထဲမကောင်းဘူး။ ဒီအသက်အရွယ်နဲ့ ကျန်းမာရေးက ဒီထက်ပိုကောင်းသင့်တယ်။ ဒဏ်ရာအနာရွတ်တွေကို မြင်ရတော့ စိတ်မကောင်းဘူး” ဟု အဆိုပါကော်မတီအဖွဲ့ဝင် ပြည်မြို့နယ်တိုင်းဒေသ ကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသက်ဝင်းလှိုင်က ပြောသည်။
မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်သို့ ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ လူကုန်ကူးမှု တားဆီးနှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ ချိတ်ဆက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း လုပ်ဆောင်နေသည့် အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ အားရကျေနပ်ဖွယ်မရှိသည့် အခြေအနေများရှိခဲ့ကြောင်း အဆိုပါအမှုကို လိုက်ပါကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူ ဦးကျော်ဆွေက ပြောသည်။
“အစိုးရဘက်က လူကုန်တားတွေ သူတို့တွေက လူကုန်ကူးမှုမြောက်နေတဲ့ အတိုင်းအတာကို အရေးယူဆောင်ရွက်မှု နှောင့်နှေးနေတဲ့အတွက် အပြစ်ရှိသူတွေကို အခွင့်အရေးပေးထားသလိုဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါကြောင့် အမြန်ဆုံးလူကုန်ကူးမှုကို ပေါ်လွင်အောင် လုပ်ပေးစေချင်တယ်။ အားတက်သရော ဆောင်ရွက်စေချင်တယ်။ သေချာစုံစမ်းမှုတွေ မလုပ်တဲ့အခါကျတော့ ကာယကံရှင်တွေ နစ်နာတယ်။ ဒါတွေက မဖြစ်သင့်ဘူး။ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကို ကူးသန်းရောင်းဝယ်နေသလို ကြားထဲမှာ သူတို့ပွဲစားတွေက ဖျက်ယူနေစရာမရှိဘူး။ ပြောတဲ့လစာမရဘူး။ လုပ်ခတွေ ခေါင်းပုံဖျက်တယ်။ ဒါကို လူကုန်ကူးမှု မမြောက်ဘူးလို့ပြောရင် ဘာကိုလူကုန်ကူးမှုလို့ ပြောရမှာလဲ” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ကြားနာမှုအပြီး နောက်တစ်ရက်တွင် ကြာအင်းကျေးရွာမှ ကိုမြထွန်းနှင့် ရွှေတောင်မြို့နယ်အတွင်းက ကိုရန်ပိုင်ထွန်းတို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ကိုမြထွန်းအား အမှတ် (၃) လူကုန်ကူးမှု တားဆီးနှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့စုရုံး (ပြည်) တွင် ခေါ်ယူစစ်မေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
စစ်မေးမှုအခြေအနေနှင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေများအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာတွင် “အဲဒါက ဆောင်ရွက်နေတုန်းပဲ ပြောလို့မရသေးဘူး။ စိစစ်ဆောင်ရွက်နေတုန်းပဲ။ ရတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဆက်သွယ်ပါ့မယ်” ဟု အမှတ်(၃) လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေး တပ်ဖွဲ့စုရုံး (ပြည်) မှ ရဲအုပ်ရဲဝင်းနိုင်က မေ ၅ ရက် ညနေပိုင်းကပြောသည်။
ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူများအဖို့ အမှုဖွင့်တိုင်တန်းရာတွင်လည်း အကြိမ်ကြိမ်စစ်မေးနေမှုများနှင့် မမြင်နိုင်သည့် အခြားသောကြောက်လန့်မှုများ၊ ငွေကြေးမတတ်နိုင်မှုများကြောင့် မတရားနှိပ်စက်မှုများနှင့် အလုပ်သမားအခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးမှုများ၊ ငွေကြေးခေါင်းပုံဖြတ်မှုများကို တစ်ဦးတစ်ယောက်ခြင်းအနေဖြင့် ပြန်လည်တုံ့ပြန် ပြောဆိုချေပမှုများ မပြုလုပ်နိုင်ကြတော့ချေ။
“အခုဖြစ်စဉ်မှာဆိုရင်လည်း ကျွန်မတို့က သက်ဆိုင်ရာမြို့တွေကိုသွားတယ်။ အဲဒီက လူကုန်တားရဲတွေက တခြားတစ်ယောက်ကို လွှဲတယ်။ လူကုန်ကူးမှု မမြောက်သလိုလို ပြောနေတယ်။ မြောက်တယ် မမြောက်ဘူးဆိုတာက စစ်မေးပြီးမှ သိလာရမှာလေ။ အခုက သွားအမှုဖွင့်ရုံရှိသေးတယ်။ လူကုန်ကူးမှုမမြောက်ဘူးလို့ တန်းပြောတယ်။ အခုလည်း သူတို့ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို ဘာမှမသိရသေးဘူး။ ကျွန်မတို့ အလုပ်ဆက်လုပ်ဖို့ နှောင့်နှေးနေတယ်” ဟု အလုပ်သမားများဘက်က ဥပဒေအကူညီပေးနေသူ ရှေ့နေတစ်ဦးက ပြောသည်။
ရေးမြို့ ပင်လယ်ပြင်မှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း ပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းများအဖြစ် သေမှုသေခင်းဖွင့်ပေးခဲ့ရသည်မှာ အလောင်း ၄၀ ခန့်ရှိခဲ့ကြောင်း ရဲစခန်း၏မှတ်တမ်းများ ကိုးကားကာ အလုပ်သမားများကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူ ကိုနေထွန်းထံက သိရသည်။
“အဲဒီအထဲမှာ အသက်မပြည့်သေးတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်က မလုပ်နိုင်တော့ နှိပ်စက်ခံရတယ်။ အကန်အကျောက်ခံရတယ်။ ရေထဲကိုကန်ချတာ ခဏခဏပဲ။ ကျွန်တော်တို့က နောက်ကနေလိုက်ပြီးထုတ်လို့ ပြန်လာရတာ။ ဟိုမှာကျန်ခဲ့တာ ၁၀၀ နီးပါးလောက် ကျန်သေးတယ်။ စာရင်းရှိငါးဖမ်းဖောင်တွေက ၅၀ လောက်ရှိပြီး တရားဝင်က ငါးဦးလောက်ပဲရှိတယ်” ဟု ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည့် ပြည်မြို့မှ မောင်အောင်ပြည့်မင်းက ပြောသည်။
တစ်နှစ်တွင် ခုနစ်လတာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ရသည့် ပင်လယ်ပြင်ကျားဖောင်လုပ်ငန်းများက ဧပြီလတွင် ရာသီချိန်ကုန်၍ ခေတ္တနားခိုရတော့မည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပြည်ဒေသအတွင်းရှိ တရားမ၀င်ရေလုပ်သားအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ရသူ ၄၀ ခန့်တွင် လူသေဆုံးမှုနှင့် လူကုန်ကူးမှုတစ်မှုကိုသာ မော်လမြိုင်တရားရုံးတွင် အမိန့်ချနိုင်ခဲ့ပြီး ကျန်သူများမှာ အမှုဖွင့်ထားခြင်း ရှိ မရှိကိုပင် မသိရတော့ဘဲ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများကတော့ ကုန်ဆုံးသွားသော နှစ်များနှင့်အတူ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
“ကျွန်တော့်ကို ရိုက်သူတွေကို မှတ်လောက်သားလောက်ဖြစ်အောင် ပညာတော့ပေးချင်တယ်။ နောက်တစ်ခေါက် သွားဦးမလားဆိုရင် အိပ်မက်မက်ရင်တောင် မျက်နှာထသစ်ပစ်မယ်” ဟု မြေစိုက်တဲတစ်လုံးအတွင်းမှ မြစ်ပြင်အတွင်းငေးနေရင်း ကိုနေမျိုးက ပြောဆိုလိုက်သည်။
Posted in Features, HeadlineTagged လူကုန်ကူးမှုLeaveaComment on ရေးမြို့ ပင်လယ်တွင်းက ငရဲခန်းများ (သို့မဟုတ်) သေမင်းထံမှ လွတ်မြောက်ကြခြင်း
Posted on May 5, 2018 May 5, 2018 by Eleven Media Group
ယခုနှစ် ဇန်န၀ါရီမှ ဧပြီလကုန်အထိ လေးလအတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူကုန်ကူးခံရမှု စာရင်းများအရ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် အများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း လူကုန်ကူးမှု တားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်များအရ သိရသည်။
လူကုန်ကူးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်များတွင် ရှမ်းပြည်နယ်မှာ ၂၃ မှုဖြင့် အများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ ၁၈ မှုဖြင့် ဒုတိယအများဆုံး ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ၁၂ မှု၊ ကချင်ပြည်နယ်တွင် ငါးမှု၊ ပဲခူးတိုင်းတွင် လေးမှု၊ ဧရာဝတီတိုင်းတွင် သုံးမှု၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် နှစ်မှု၊ မွန်ပြည်နယ်တွင် နှစ်မှု၊ နေပြည်တော်တွင် နှစ်မှု၊ ကရင်ပြည်နယ်တွင် တစ်မှု၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် တစ်မှု၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းတွင်တစ်မှု စုစုပေါင်း ၇၄ မှုဖြစ်သည်။
လူကုန်ကူးခံရသူများတွင် အမျိုးသမီး ၉၇ ဦး၊ မိန်းကလေးငယ် ငါးဦး၊ အမျိုးသား ၁၁ ဦး စုစုပေါင်း ၁၁၃ ဦး လူကုန်ကူးခံခဲ့ရကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှု တားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်ချက်များအရ သိရသည်။
လူကုန်ကူးသည့် အမှုပေါင်းမှာ ၇၄ မှုမှ တရားခံပေါင်း ၁၉၉ ဦးရှိပြီး အမျိုးသမီးတရားခံ ၁၄၄ ဦး အမျိုးသားတရားခံ ၅၅ ဦးတို့ဖြစ်ကြောင်း လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့က ထုတ်ပြန်သည်။
ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူကုန်ကူးမှုများအနက် တရုတ်နိုင်ငံသို့ အဓမ္မလက်ထပ်မှုစေခိုင်းမှု ၅၇ မှု၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင် အလုပ်သမားအဖြစ် အဓမ္မစေခိုင်းရန်တစ်မှု၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အလုပ်သမားအဖြစ် အဓမ္မစေခိုင်းရန် တစ်မှု၊ ပြည်တွင်းတွင်အလုပ်သမားအဖြစ် အဓမ္မစေခိုင်းရန် တစ်မှုနှင့် အိမ်ဖော်အဖြစ်စေခိုင်းရန် တစ်မှု၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ပြည့်တန်ဆာအဖြစ်စေခိုင်းရန် တစ်မှု၊ ပြည်တွင်းတွင် ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် စေခိုင်းရန် ၁၂ မှုတို့ဖြစ်ကြောင်း လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်များအရ သိရသည်။
Posted in NewsTagged လူကုန်ကူးမှုLeaveaComment on လေးလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူကုန်ကူးခံရမှု စာရင်းများအရ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် အများဆုံးဖြစ်ပွား
၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ မတ်လအထိ လူကုန်ကူးခံရသူ ၁၅၂၇ ဦးအား ပြန်လည်ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့
၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ မတ်လအထိ လူကုန်ကူးခံရသူ ၁၅၂၇ ဦးအား ပြန်လည်ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ကြောင်း လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးက ပြောကြားခဲ့ကြောင်း လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
“၂၀၁၅ ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လအထိ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့ကနေ လူကုန်ကူးခံရသူ မြန်မာနိုင်ငံသား စုစုပေါင်း ၁၅၂၇ ဦးကို ပြန်လည်ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် ပြည်တွင်းလူကုန်ကူးခံရသူ ၅၈ ဦးကိုလည်း မိဘရပ်ထံ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်” ဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးက ပြောကြားသည်။
ထို့ပြင် နိုင်ငံတော်သည် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဦးတည်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဦးတည်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် လူကုန်ကူးမှုများ လျော့နည်းပပျောက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ဆောင်ရွက်နေဆဲကာလများအတွင်း လူကုန်ကူးမှုများ ဖြစ်ပွားမှုလျော့နည်းစေရန်နှင့် လူကုန်ကူးခံရသူများအတွက် စောင့်ရှောက်ခြင်းကို စနစ်တကျဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ လူကုန်ကူးခြင်းအား ဆိုးရွားသည့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ်အတွင်း ကုလသမဂ္ဂ လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းသို့ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် လူကုန်ကူးမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ကြောင်း၊ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက် ဗဟိုအဖွဲ့နှင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့သုံးဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်အနက် လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဌာနသည် လူကုန်ကူးခံရသူများအား ပြန်လည်လက်ခံရေး၊ ပြန်လည်ဝင်ဆံ့ ပေါင်းစည်းရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ပြောကြားသည်။
ထို့ပြင် ပြည်တွင်း၌ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးများကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင်များနှင့် ရေလုပ်ငန်းများတွင် လူကုန်ကူးခံနေရကြောင်း၊ မိမိတို့ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်လည်း အခြေခံလူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများနှင့် ညီညွတ်သော လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ အပြည့်အ၀ရရှိနိုင်မည့် လူမှုအသိုက်အ၀န်းတစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာစေရန် အထောက်အကူဖြစ်စေရေးနှင့် အားလုံးအကျုံးဝင်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့မှုရှိသည့် လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး နည်းလမ်းများဖြင့် ပြည်သူလူထု လွတ်လပ်လုံခြုံစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး မူဝါဒချမှတ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
Posted in PoliticsTagged လူကုန်ကူးမှုLeaveaComment on ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ မတ်လအထိ လူကုန်ကူးခံရသူ ၁၅၂၇ ဦးအား ပြန်လည်ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့
ပွဲစား၏ တရားမ၀င်ပို့ဆောင် လူကုန်ကူးခံရသူ မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၄ ဦးအား အလုပ်သမားသံအရာရှိနှင့် MWRN အဖွဲ့ ချိတ်ဆက်ကာ မိခင်နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရန် စီစဉ်နေစဉ်
ပွဲစား၏ တရားမ၀င်ပို့ဆောင် လူကုန်ကူးခံရသူ မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၄ ဦးအား အလုပ်သမားသံအရာရှိနှင့် MWRN အဖွဲ့ ချိတ်ဆက်ကာ မိခင်နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့အနီး စမွတ်ဆာခွန်ခရိုင်၊ မဟာချိုင်နယ်မြေရှိ ဝေလရပ်ကွက် (၁၀) လမ်းတွင် ပွဲစားများက တရားမ၀င်ပို့ဆောင်ကာ လူကုန်ကူးခံထားရသည့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ၁၄ ဦးအား အလုပ်သမားသံအရာရှိ ဦးစန်းမောင်ဦးနှင့် နယ်မြေခံအလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် MWRN အဖွဲ့တို့မှ ချိတ်ဆက်၍ ဧပြီ ၂၅ ရက်က ကယ်ထုတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တရားမ၀င်ပို့ဆောင်ခြင်းခံရသူ မြန်မာနိုင်ငံသားများ အမျိုးသားငါးဦး၊ အမျိုးသမီးကိုးဦးတို့မှာ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ငဖဲမြို့နယ်မှဖြစ်ပြီး ပွဲစားဖြစ်သူ ဦးကြည်နိုင်က တစ်ဦးလျှင် ကျပ်ငွေရှစ်သိန်း အမြန်ကြေးဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
“ကျွန်မတို့ကိုပြောတော့ မြ၀တီလမ်းကနေ သွားရမယ်။ မြ၀တီမှာ စာချုပ်ချုပ်တာ လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်။ နောက်တော့ မြ၀တီလမ်းက လူများနေလို့ မြိတ်ဘက်ကနေပဲ သွားတော့မယ်ဆိုပြီး ပြောတယ်။ ကျွန်မတို့တွေ မြိတ်ကားဂိတ်ရောက်တော့ မြန်မာ-ထိုင်း နယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့ မောတောင်ကိုသွားဖို့ဆိုပြီး ပွဲစားဦးကြည်နိုင်တို့နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ မသန္တာဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက လာကြိုတယ်။ အဲဒီကနေမှ ထိုင်းဘက်ကိုသွားဖို့ အစိမ်းရောင်ကတ်ပြားလေး (Border Pass) တွေလုပ်ပေးတယ်။ ထိုင်းဘက်ခြမ်းကိုရောက်တော့ နယ်စပ်ကနေ ပကျွတ်မြို့ထဲကိုသွားဖို့ ထိုင်းနိုင်ငံသား ပွဲစားတစ်ဦးက ကားနဲ့သူ့အိမ်ကို ခေါ်သွားတယ်။ အဲဒီကနေမှ မဟာချိုင်မြို့ကိုသွားဖို့ ပွဲစားကိုလှဝင်းတို့ လင်မယားနှစ်ဦးက ကားနဲ့လာကြိုတာပါ” ဟု အလုပ်သမားတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ မြန်မာအလုပ်သမားများမှာ ထိုင်းနိုင်ငံ စမွတ်ဆာခွန်ခရိုင် မဟာချိုင်မြို့သို့ရောက်ရှိပြီး တစ်လခန့်ကြာပြီးသည့်တိုင် အလုပ်လုပ်ခွင့်မရရှိသလို နေထိုင်ရာတွင်လည်း အတည်တကျနေထိုင်ရခြင်း မရှိကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ ပတ်စပို့စာအုပ်များကိုလည်း ပွဲစားက သိမ်းထားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ထို့ပြင် ပွဲစားဖြစ်သူ ကိုလှဝင်းဆိုသူက ဗီဇာပြုလုပ်ရန်နှင့် အလုပ်ရှင်ပြောင်းရန်အတွက် အလုပ်သမားတစ်ဦးစီထံမှ ထိုင်းနိုင်ငံသုံး ဘတ်ငွေ ၁၅၀၀၀ စီ ထပ်မံပေးဆောင်ရန်အတွက် လုပ်ခလစာထွက်သည့်အချိန်၌ ထိုင်းဘတ်ငွေ ၂၀၀၀ စီကိုလည်း အလုပ်သမားများထံမှ ဖြတ်တောက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ကျွန်မတို့တွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တစ်ဦးစီအတွက် ငွေကျပ်ရှစ်သိန်းစီ ပေးခဲ့ရတာပါ။ အဲဒီငွေကျပ် ရှစ်သိန်းကလည်း အတိုးနဲ့ချေးပြီး ပေးခဲ့ရပါတယ်။ အခုလည်း ဘာလို့ထပ်ပြီး ပိုက်ဆံတောင်းတာလည်းပေါ့နော်။ လောလောဆယ် ကျွန်မတို့မှာလည်း အခက်အခဲတွေဖြစ်လို့ သူတို့ကိုတောင်းပန်တာ မရဘူး။ အလုပ်လုပ်တဲ့ ကိုးရက်အတွက် လုပ်အားခငွေ ဘတ် ၃၁၂၆ ဘတ်ရတာ ပွဲစားကိုလှဝင်းက ဘတ်ငွေ ၂၀၀၀ အဓမ္မလာယူသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ အခုလိုဒုက္ခတွေဖြစ်တာနဲ့ အလုပ်သမားသံအရာရှိ ဦးစန်းမောင်ဦးထံ ဖုန်းဆက်အကူအညီတောင်းခံခဲ့ရတာပါ” ဟု အလုပ်သမတစ်ဦးက ဆိုသည်။
“ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့က MoU စနစ်နဲ့ပဲလာလာ၊ ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့လာလာ ထိုင်းနိုင်ငံကို ရောက်ရှိလာပြီး အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကို ကူညီမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ အခုအလုပ်သမား ၁၄ ဦးဆိုလည်း သူတို့တွေ ထိုင်းနိုင်ငံကို တရားမ၀င်နည်းလမ်းနဲ့ ၀င်လာကြတယ်။ လူကုန်ကူးခံထားရတယ်ဆိုတာတောင် မသိရှာဘူး။ ပွဲစားတွေက လုပ်အားခငွေကြေးတွေကို မတရားသဖြင့် ဖြတ်တောက်တာတွေ လုပ်လာလို့သာ ကျွန်တော်တို့ထံ အခုလိုရောက်လာတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တိုင်းတစ်ပါးမှာ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသားတွေကိုတော့ အစွမ်းကုန်ကူညီမှုပေးသွားမှာပါ” ဟု အလုပ်သမားသံအရာရှိ ဦးစန်းမောင်ဦးက ပြောကြားသည်။
Posted in NewsTagged မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား, လူကုန်ကူးမှုLeaveaComment on ပွဲစား၏ တရားမ၀င်ပို့ဆောင် လူကုန်ကူးခံရသူ မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၄ ဦးအား အလုပ်သမားသံအရာရှိနှင့် MWRN အဖွဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး မိခင်နိုင်ငံ ပြန်ပို့မည်
ဥရောပသမဂ္ဂက ရွှေ့ပြောင်းအခြေချများအား လူကုန်ကူးသူ ၆၅၀၀၀ ကို ခြေရာခံလိုက်နေ
၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်က လစ်ဗျားကမ်းရိုးတန်းအလွန်တွင် ကယ်တင်ခဲ့ရသည့် ရွှေ့ပြောင်းအခြေချများနှင့် ဒုက္ခသည်များကို တွေ့ရစဉ် (Photo: AFP)
ဥရောပဥပဒေစိုးမိုးရေး အရာရှိများက ၎င်းတို့သည် လက်ရှိတွင် လူကုန်ကူးသူ ၆၅၀၀၀ ထက် မနည်းကို ခြေရာခံလိုက်နေသည်ဟု ပြောခဲ့ကြသည်။ ယင်းပမာဏသည် တရားမ၀င် လူကုန်ကူးမှု အားကောင်းကာ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချ အကျပ်အတည်း ကြီးထွားနေသော လွန်ခဲ့သည့် သုံးနှစ်ကထက်ပင် နှစ်ဆပိုမိုများပြားနေခြင်းဖြစ်သည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ပြီးဆုံးပြီးနောက်ပိုင်း အကြီးမားဆုံးဥရောပ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူ အကျပ်အတည်းကြီးသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ယင်းနောက်ပိုင်း မြေထဲပင်လယ်ကို အောင်မြင်စွာ ဖြတ်ကူးပြီး ဥရောပသို့ ရောက်လာသူဦးရေသည် လျော့ကျသွားသော်လည်း လူကုန်ကူးသူများအား လိုအပ်ချက်မှာ ကြီးမားနေဆဲဖြစ်သည်ဟု ဥရောပရဲအေဂျင်စီ Europol က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဥရောပနိုင်ငံများမှ ထောက်လှမ်းရေးများသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် တိုးတက်မှုအမြန်ဆုံး စီစဉ်လုပ်ဆောင်သော နိုင်ငံတကာရာဇ၀တ်မှု၏နောက်သို့ ခြေရာခံလိုက်ကြစဉ် လူမှောင်ခိုသမားဟု သံသယရှိသူ အသစ်အများအပြားကိုလည်း တွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
“ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကုန်ပိုင်းက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အချက်အလက်တွေထဲမှာ လူမှောင်ခိုသမား ၆၅၀၀၀ ရှိခဲ့ပါတယ်” ဟု Europol ၏ ဥရောပ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူ မှောင်ခိုကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာစင်တာမှ အကြီးအကဲ ရောဘတ်ခရီပင်ကိုက ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလက လူမှောင်ခိုကုန်ကူးသူဟု သံသယရှိသူ ၃၀၀၀၀ ခန့်ရှိရာမှ ၂၀၁၆ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ၅၅၀၀၀ နီးပါးသို့ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ထိုပမာဏသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ၁၀၀၀ ကျော် ထပ်မံပိုများလာခဲ့သည်ဟု Europol ၏ အချက်အလက်များအရ သိရသည်။ အဆိုပါ လူမှောင်ခိုကူးသူများ အနက် ၆၃ ရာခိုင်နှုန်းသည် ဥရောပမှဖြစ်ပြီး ဘော်လ်ကန်နိုင်ငံများမှ ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်သည်ဟု သိရသည်။ ၁၄ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှဖြစ်ကြပြီး အာဖရိကမှ ၁၃ ရာခိုင်နှုန်း၊ အရှေ့အာရှမှ ကိုးရာခိုင်နှုန်းနှင့် အမေရိကမှ တစ်ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။
ဥရောပသို့ သွားရောက်ရန် အဓိကထွက်ပေါက်ကြီးများဖြစ်ကြသော လစ်ဗျား၊ တူရကီတို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဥရောပသမဂ္ဂက သဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့ပြီး နောက်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူ ၀င်ရောက်မှုမှာ ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း လူမှောင်ခိုလုပ်ငန်းသည် ယူရိုဘီလျံပေါင်းများစွာ တန်ဖိုးရှိကာ အရှိန်ကောင်းနေဆဲ စီးပွားရေးတစ်ခု ဖြစ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ခရီပင်ကိုက ပြောကြားခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင်မူ ဥရောပသို့သွားရန် အဓိကတစ်ဆင့်ခံနေရာမှာ လစ်ဗျားနိုင်ငံဖြစ်သည်။ လစ်ဗျားတွင် ကျွန်ပြုမှုများ အပါအ၀င် ဆာဟာရအောက်ပိုင်းဒေသရှိ အာဖရိကန်များအပေါ် ဆိုးဆိုးရွားရွား အကြမ်းဖက်မှုများရှိသည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့သဖြင့် နိုဝင်ဘာလက အဘစ်ဂျန်တွင် ကျင်းပသည့် ဥရောပ-အာဖရိကထိပ်သီးအစည်းတွင် အရေးပေါ် ဆောင်ရွက်ချက်များ ချမှတ်ခဲ့သည်။ ထိုထိပ်သီး၌ ရရှိခဲ့သည့် သဘောတူညီချက်တစ်ခုကြောင့် ထောင်နှင့်ချီသော ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူများကို လစ်ဗျားမှနေရပ်သို့ အလျင်အမြန် ပြန်ပို့ခဲ့ကြသည်။
အောင်မြင်မှု လျင်လျင်မြန်မြန် မရနိုင်
သို့သော် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာ အလားတူထပ်မံ ပူးပေါင်းမှုများ လုပ်ဆောင်ရေးကို လူ့အခွင့်အရေးအပေါ် လေးစားမှုရှိကြောင်း အာမခံချက်များ ရရှိရန် လိုအပ်သည်ဟု ခရီပင်ကိုက ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းအချက်သည် အာဖရိကနိုင်ငံများမှ အစိုးရများနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်နေသည်။ “ဒါကြောင့် ဒီကိစ္စမှာ လျင်လျင်မြန်မြန်နဲ့ အောင်မြင်မှုရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး” ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ကန့်သတ်ထားသည့် အချက်အလက်များကို ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်သည့် နိုင်ငံများသို့ မျှဝေနိုင်သော ဥပဒေအခြေခံသစ်ကို ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင် Europol က စတင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုကြောင့် စပိန်မြို့များတွင် ပြည့်တန်ဆာလုပ်ရန် နိုင်ဂျီးရီးယား အမျိုးသမီးများကို ပို့နေသည့် ဂိုဏ်းတစ်ဂိုဏ်းကို ဖြိုခွင်းခဲ့ခြင်း အပါအ၀င် မကြာသေးမီက ရရှိခဲ့သည့် အောင်မြင်မှုများကို Europol က ထောက်ပြခဲ့သည်။
လစ်ဗျားသည် ပြီးခဲ့သည့်လက လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ လစ်ဗျား အခြေစိုက်အာဖရိကန်သံရုံးတို့မှ အရာရှိများအပါအ၀င် လူပေါင်း ၂၀၅ ဦးကို လူမှောင်ခိုကူးမှုဖြင့် ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခဲ့သည်။ လစ်ဗျားနှင့် အီတလီတို့ပူးပေါင်းမှု၏ ရလဒ်ဖြစ်သော ထိုလုပ်ဆောင်ချက်သည် လစ်ဗျားနိုင်ငံထဲတွင် အလုံးစုံ အပြစ်လွတ်ကင်းသည်ဟု ယူဆနေမှုများကို အဆုံးသတ်ရန် ခြေလှမ်းတစ်ခုဟု အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့မှာ မာဝီမိုဟာမက်က ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော် ဥရောပသည် ၎င်း၏နယ်စပ်များအား ပိတ်ပင်ရေးကိုသာ ရှေ့တန်းတင်လွန်းသည်ဟု အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရွှေ့ပြောင်းသူများဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း (IOM) ၏ ဥရောပရုံးမှ ယူဂျီနီယိုအမ်ဘရိုစီက ဆိုသည်။
Posted in InternationalTagged လူကုန်ကူးမှုLeaveaComment on ဥရောပသမဂ္ဂက ရွှေ့ပြောင်းအခြေချများအား လူကုန်ကူးသူ ၆၅၀၀၀ ကို ခြေရာခံလိုက်နေ
အိမ်အကူမိန်းကလေးကို မျက်လုံးတစ်ဖက်ကွယ်၊ မျက်နှာတစ်ခြမ်းပျက်သည်အထိ အက်စစ်ဖြင့်ပက်ကာ ရှစ်နှစ်ကြာ ပိတ်လှောင်ခဲ့သူ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးအား ဒုတိယအကြိမ် ချုပ်မိန့်တောင်းခံပြီး ဆက်လက်စစ်ဆေး
အိမ်အကူမိန်းကလေးအား နှိပ်စက်ခဲ့သည့် အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကို မတ် ၁၄ ရက်က ရုံးထုတ်လာစဉ်
အိမ်အကူမိန်းကလေးကို မျက်လုံးတစ်ဖက်ကွယ်၊ မျက်နှာတစ်ခြမ်းပျက်သည်အထိ အက်စစ်ဖြင့်ပက်ကာ ရှစ်နှစ်ကြာပိတ်လှောင်ခဲ့ကြသည့် အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကို ချမ်းမြသာစည် မြို့နယ်တရားရုံးတွင် ဒုတိယအကြိမ် ချုပ်မိန့်တောင်းခံကာ ဆက်လက်စစ်ဆေးနေကြောင်း ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်တရားရုံးမှ သတင်းရရှိသည်။
“မတ် ၁ ရက်ကနေ ၁၄ ရက်အထိ ပထမအကြိမ် ချုပ်မိန့်ရမန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ကတော့ မတ် ၂၆ ရက်ထိ ဒုတိယအကြိမ် ရမန်ထပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဒုတိယအကြိမ် ရမန်စေ့ရင်တော့ စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ တရားရုံးမှာပဲ တရားစွဲဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို စွဲဆိုထားတဲ့ လူကုန်ကူးမှုပုဒ်မတွေက ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်ကနေ တစ်သက်တစ်ကျွန်းအထိ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ချုပ်ရက်ရမန်စေ့ရင်လည်း ခရိုင်တရားရုံးမှာပဲ တရားစွဲဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်တရားရုံးမှ သတင်းပြန်ကြားရေးအရာရှိ ဦးကျော်စွာလင်းက ပြောကြားသည်။
အက်စစ်ဖြင့်ပက်ခံရသဖြင့် မနန်းမေဇင်ဦး၏ ဘယ်ဘက်မျက်နှာတစ်ခြမ်း ဆိုးရွားစွာပျက်စီးခဲ့ရာ ပြန်လည်ကုသနိုင်ရန်အတွက် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့မှ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်သန္တာဘုန်းဝင်း ဦးဆောင်ကာ ဆေးစစ်ပေးမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်း သိရသည်။
ရွာငံမြို့နယ် နဘမ်းကြီးကျေးရွာတွင် နေထိုင်သည့် မနန်းမေဇင်ဦး (၂၅ နှစ်) အား ဒေါ်မိုးမိုးဆိုသူမှ မန္တလေးမြို့ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မြရည်နန္ဒာရပ်ကွက်ရှိ ကုန်စုံဆိုင်တွင် တစ်လကျပ် ၁၀၀၀၀ ဖြင့် အလုပ်လုပ်ရန်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက် ဒေါ်မိုးမိုးကုန်စုံဆိုင် ပိတ်လိုက်သဖြင့် ဒေါ်မိုးမိုး၏အစ်ကိုဖြစ်သူ ကုန်စုံဆိုင်သို့ ထပ်မံအလုပ်လုပ်ခဲ့ရကာ ထိုသို့အလုပ်လုပ်နေစဉ် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဒေါ်မိုးမိုး၏ ချွေးမတော်စပ်သူ မနီနီနုနွယ်နှင့် သူမသူငယ်ချင်းများနှင့် သင်္ကြန်လည်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့သင်္ကြန်လည်စဉ် မနီနီနုနွယ်၏ သူငယ်ချင်းဆိုသူ ဟိန်းကိုကိုမှ မနန်းမေဇင်ဦးအား ချစ်ကြိုက်ကြောင်းပြောဆိုရာမှစ၍ မနီနီနုနွယ်မှ သူမကို ရိုင်းပြစွာဆက်ဆံလာခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် သင်္ကြန်နှစ်ဆန်းတစ်ရက်တွင် သူမရေချိုးနေစဉ် မနီနီနုနွယ်မှ အက်စစ်ဖြင့်ပက်ခဲ့ရာ ၀ဲဘက်မျက်နှာတစ်ခြမ်း ပျက်စီးခဲ့ပြီး ၀ဲဘက်မျက်လုံးကွယ်ခဲ့ရကြောင်း၊ ထိုသို့အက်ဆစ်ဖြင့် လောင်းခံရသည့် ဒဏ်ရာများကြောင့် မနန်းမေဇင်ဦးကို ဒေါ်မိုးမိုးမှပြုစုပေးခဲ့ကြောင်းသိရပြီး ဖခင်ဖြစ်သူရောက်လာချိန်တွင် ရပ်ကွက်ရုံးသို့ခေါ်ဆောင်ကာ ဆေးကုသပေးမည်ဖြစ်သဖြင့် အမှုမဖွင့်ရန် လက်မှတ်ထိုးခိုင်းခဲ့ကြောင်း၊ ဖခင်ဖြစ်သူကို ကျပ်တစ်သိန်းတစ်ကြိမ်၊ သုံးလခန့်အကြာတွင် ကျပ်နှစ်သိန်းတစ်ကြိမ် ပေးခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါ အက်စစ်ဖြင့်ပက်ခဲ့သည့် ဒဏ်ရာများကြောင့် အခန်းတွင်းပိတ်လှောင်ထားခဲ့ရာ လေးနှစ်ခန့်ကြာခဲ့ကြောင်း၊ တစ်ရက်တွင် မနန်းမေဇင်ဦးသည် အမှိုက်ပုံးသွန်ရာ မနိုင်သဖြင့် မှောက်ကျခဲ့ရာ မနီနီနုနွယ်မှ နံရံနှင့်တွန်းကန်ဆောင့်လှဲခြင်း၊ ၀က်စာပုံးထဲသို့ မျက်နှာအပ်ပြီးဖိချခြင်း၊ ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သဖြင့် ၎င်းတို့အလစ်တွင် နေအိမ်မှထွက်ပြေးခဲ့ရာ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ယခုကဲ့သို့ ဖြစ်စဉ်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မနီနီနုနွယ်နှင့် ဒေါ်မိုမိုးတို့ကို ရဲမှူးမျိုးဇင်က တရားလိုပြုလုပ်ကာ လူကုန်ကူးမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၂၄/၃၂ ဖြင့် မတ် ၁ ရက်ကလည်းကောင်း၊ နစ်နာသူ မနန်းမေဇင်ဦးက တရားလိုပြုလုပ်ကာ သူမအား ဘယ်ဘက်မျက်နှာတစ်ခြမ်းပျက်စီးပြီး ဘယ်ဘက်မျက်လုံးကွယ်သည်အထိ အက်စစ်ဖြင့်ပက်ခဲ့သူ မနီနီနုနွယ်၊ အိမ်အတွင်း နှစ်ရှည်ကြာမြင့်စွာပိတ်လှောင်၍ အနိုင်အထက်ပြုကျင့်ပြီး လုပ်ခလစာမပေးဘဲ အိမ်ဖော်အဖြစ်ခိုင်းစေခြင်း၊ ပိတ်လှောင်ခြင်းများပြုလုပ်ရာတွင် ၀ိုင်းဝန်းကူညီပေးခဲ့သူ ဒေါ်မိုးမိုးနှင့် သားဖြစ်သူ ကိုသူရ (ခ) အားတီတို့ကို အရေးယူပေးပါရန် ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၂၆/ ၃၄၄/ ၁၁၄ တို့ဖြင့် မတ် ၃ ရက်က ထပ်မံအမှုဖွင့်ထားပြီး ကိုသူရ (ခ) အားတီကိုမူ ဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
Posted in Crime, NewsTagged လူကုန်ကူးမှုLeaveaComment on အိမ်အကူမိန်းကလေးကို မျက်လုံးတစ်ဖက်ကွယ်၊ မျက်နှာတစ်ခြမ်းပျက်သည်အထိ အက်စစ်ဖြင့်ပက်ကာ ရှစ်နှစ်ကြာ ပိတ်လှောင်ခဲ့သူ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးအား ဒုတိယအကြိမ် ချုပ်မိန့်တောင်းခံပြီး ဆက်လက်စစ်ဆေး